Semalt Expert: Nzira Yokurwisana Nezvinetso Zvinokuvadza Zvimwe
Muzana remakore rechi21, kuchengeteka kwemawebsite uye web applications zvakaratidzaIva chinonyanya kukoshesa munyika ye digital. Makambani ose anobatanidzwa mukuita bhizinesi kushandisa teknolojia inotambura kune iyo dambudziko.Mamwe mabhizimisi anenge atova nharo dzeInternet Attacks asi vamwe vanoenderera mberi vachiita mune imwe nzvimbo inowedzera nengozi yepaIndaneti yakazarayevasiki.
Frank Abagnale, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt Digital Services, chinangwa chekucherechedza mabhizinesi e-internet pamusoro pekudzivirira Cyber ​​Mashamisi ezvo web applications kana mawebsite. Uyezve,mazano anokosha ayo kambani inogona kuita mukusimudzira mararamiro avo ekuchengetedzwa anoiswawo pachena - faa voce mesmo seu site gratis. Munyaya iyi, inokoshakuti vanzwisise kuti kunyange makambani makuru uye akasimbiswa anogona kuchinjwa nekudengenyeka. Semuenzaniso, Zamota akatambidzwa mangwanani ano,uye zvinyorwa zvaro zvakavanzika nevashandisi 'database vakashandiswa zvisina kunaka nevanotya. Saka unogona sei kuchengetedza webhusaiti yako kubva kuCyber ​​Attacks?
Kutanga, shandisa maitiro matsva uye software. Vanenge vese vesaiti vema site vaneakanzwa nezveMagento, Joomla, uye WordPress iyo ine zvinyorwa zvinoshandiswa zvinoda kubhadharwa kwebhodhi kuti udzidze kana kuisa yakapfuuraplugins uye versions. Munyaya iyi, vashandisi vemaiti uye vashandisi vanorayirwa kusarudza pakusarudza pasi mahedheni aripo kubva kuvasviki vanogonavakazvigadzirira nemaune ivo vachida kuvhara mawebhusayithi. ICMS (Content Management Systems) dzinharaunda dzakadai seWP (WordPress) uyeMagento ave kure nekushanda akashanda kuchengetedza nzvimbo. Uyezve, mapurisa aya anoramba achibudisa rusununguko rwekuchengetedza nguva dzosemawebhusayithi akawanda akanyanya kuchengetedzwa kwepaIndaneti..Imwe yenzvimbo dzakaoma zvikuru ndeyekutarisira masimba. Zvisinei, mabhizinesi eIndaneti anorayirwa kutishandisa kugadzirisa kugadzirisa sarudzo. Kambani yekugadzirisa inotarisira kuchengetedzwa kwekuchengetedza paunenge uchishandisa purogiramu. Nokudaro, mabhizimisi anogona kugararamba wakachengetedzeka kubva pakuvhara.
Chinyorwa chekuchengetedzwa uye chekucherechedza ndiyo yechipiri chekuchengeteka kwewebsite. Onlinevashandisi vanofanira kusika nekuchengetedza masipepisi akasimba akaumbwa nevanhu vakasiyana-siyana, alphabets, uye nhamba kuitira kuti parege kuva nomunhu anogona kuvakuvadza nyore nyore.Panyaya imwe chete, vashandisi vemadhina uye vashandisi vanogona kuisa zvimwe zveGoogle zvinoshandiswa izvo zvinorega kubba kwepaswedi nemamwe maIndanetiweb applications kana masayiti. Somuenzaniso, Chrome browser inopa chirevo chinonzi "Password Alert", iyo inogona kubudiswa uyeakaiswa pachena pamusana pemashini ose.
Chechitatu, shandisa zvishandiso panzvimbo inoita kuti DDoS (Kuparidzirwa Kuramba Kwebasa).DDoS ndiyo nzira inotanga kuitika yevanorwisa uye vanoparadzanisa kutumira zvinyorwa zvenhema pane imwe nzvimbo yewebhu kuitira kuti zvigadzirwa zvayo zvirege kuwanikwa.Iyo yakawanda yemotokari inoita kuti nzvimbo isakwanike inotumirwa kubva kune dzimwe nzvimbo. Chaizvoizvo, iyo inogona kuisa njodzi kune masangano osepasi rose inotapukirwa uye inopesana neTrojans nevatambudzi vanokonzera imwe nzira panguva. Google ine chigadzirwa chinonzi GoogleShield Project kuchengetedza mawebsite matsva kubva kuDDoS kushungurudzwa kwakaipa. Basa racho rinowanikwa pasina kushandiswa nevepanhau rediki rekuInternet,nzvimbo itsva, uye vatori venhau vanozvimirira.
Pakupedzisira, shandisa webwepu yakagadzirirwa yekutambira seva. Shanduro yakatsaurirwa yakachengetekapane kugoverwa web web hosting server nezvikamu zvakasiyana-siyana panguva. Iyo inodzivirira muridzi wepaiti kubva kune vane utsinye vanotambudza vanoshandisa kushaya simba kweimwe nzvimbo kuti ichinje mamwe mawebsite akachengetwa pane seva. Chimbofunga kushandisa web hosting services dzinopa web applications firewalls for theirkubatira mashuva.